My World: အာရှ နဲ့ ဥရောပ ကြက်တောင်ချန်ပီယံတွေရဲ့ ပြောစကား
Posted by PhyoPhyo at Thursday, October 04, 2012 Labels: အားကစားနည်းများ
ကြက်တောင်(Badminton)အားကစားနည်းဟာ ၁၈ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်မှာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်ခံအိန္ဒိယမှာ စတင် ကစားလာခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ပထမဆုံး ကြက်တောင်အားကစားပြိုင်ပွဲ(All England Open Badminton Championship)ကို ၁၈၉၉ခုနှစ်မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်အနီးက ဘက်ကင်ဟမ်ဂိတ်လမ်းမမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်တောင်ဖက်ဒရေးရှင်း(IBF) လက်ရှိ Badminton World Federation(BWF) လို့ ခေါ်တဲ့ ကြက်တောင်အားကစားအဖွဲ့အစည်းကို ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှာ ကနေဒါ၊ ဒိန်းမတ်၊ အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ နယ်သာလန်၊ အိုင်ယာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေလ်းစ် ဒေသတွေနဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့ ၁၉၃၆ခုနှစ်မှာ ပါဝင်လာခဲ့တယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ကြက်တောင်အားကစားလောကမှာ လွှမ်းမိုးနိုင်တာက အာရှနိုင်ငံတွေက ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွေက ကြက်တောင်အားကစားမှာ အားကြိုးမာန်တက်ကစားလာကြပြီး တရုတ်နိုင်ငံက အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကြက်တောင်ကစားသမားတွေ ခွန်အားအကြီးမားဆုံးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ရွှေတံဆိပ်အားလုံးကို တရုတ်နိုင်ငံကပဲ သိမ်းပိုက်ရယူသွားခဲ့တယ်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ငွေတံဆိပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
လန်ဒန်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲက အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲမှာ ရွှေတံဆိပ်ရခဲ့တဲ့ လီရွှယ်ရွေ့(Li Xuerui)ဟာ အသက် ၂၁ ပဲ ရှိသေးတဲ့ မိန်းကလေးပါ။ လီရွှယ်ရွှေ့ပြောပြတဲ့သူရဲ့အကြောင်းလေး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၄၊ ၁၉၉၁ မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဇာတိက တရုတ်နိုင်ငံ Chongqing ကပါ။ အရပ်အမြင့်က ၅ပေ ၈လက်မခွဲ ရှိတယ်။ လက်ရှိ ဘေကျင်းမှာနေထိုင်ပါတယ်တဲ့။ လီရွှယ်ရွေ့က “သူမသာ ကြက်တောင်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်မလာခဲ့ရင်၊ ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်” လို့ ဆိုတယ်။ ပညာရေးမှာ ဘွဲ့မရသေးပါဘူး။ သူမရဲ့ဝါသနာတွေက ဟော့ပေါ့စားတာရယ်၊ ဈေးဝယ်ထွက်တာရယ်၊ အိပ်တာရယ် လို့ ပြောပါတယ်။ မိသားစုမှာ မိဘနှစ်ပါးနဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိပါသတဲ့။ သူမက ညာသန်ဖြစ်ပြီး ကစားတဲ့စတိုင်လ်က တိုက်စစ်အသားပေးကစားတာကို အားသန်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပထမဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကစားပွဲက ၂၀၀၇ အာရှအငယ်တန်းချန်ပီယံပြိုင်ပွဲမှာပါ။ သူမရဲ့ အားကစားနည်းပြက ဇန်နင်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
နောက်တစ်ဦးက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်တောင်ကစားသမားတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးမှာအကြိမ်တော်တော်များများရှိနေခဲ့သူ ဒိန်းမတ်ကြက်တောင်ကစားသမား ပီတာဟေဂ့်ဂန်ဒ်(Peter Høeg Gade) ပါ။ ၁၉၉၈ ကနေ ၂၀၁၀ အထိ ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးအဆင့်တွေမှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒိန်းမတ်မြောက်ပိုင်းဒေသ အော်လ်ဘောဂ့်မြို့(Aalborg)မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ လက်ရှိ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ ကိုပင်ဟေဂင်မြို့၊ ဟောလ်တဲ(Holte) မှာနေထိုင်ပါတယ်။ နန်နာ နဲ့ အယ်လ်မာ ဆိုတဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ပီတာရဲ့ ၀ါသနာတွေကတော့ ဂီတ၊ ၀ိုင်၊ ဘောလုံး (အထူးသဖြင့် လီဗာပူးအသင်းပါတဲ့) နဲ့ ချက်ပြုတ်ခြင်းပါ။ အရပ်က ၆ ပေ မြင့်ပါတယ်။ ဒိန်းမတ်၊ အင်္ဂလိပ် နဲ့ ဂျာမန်ဘာသာစကားတွေပြောဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ပီတာဟာ ဂီတကို အရူးအမူးနှစ်သက်သူဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ပင့်ခ်ဖလွိုက်ဒ်၊ ဂျွန်လင်နွန်၊ ဘောပ့်ဒိုင်လန်၊ ရိုင်ယန်အဒမ်စ်၊ ယူတူး၊ လက်ဒ်ဇက်ပလင်၊ ရိုးလင်းစတုန်း၊ ဘီတဲလ်စ် နဲ့ အဲလန်အော်လ်စန် တို့ရဲ့ သီချင်းတွေကို အမြဲ နားထောင်တတ်သူပါ။ ပီတာရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ဂီတဟာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အမြဲပါနေခဲ့တယ်။ တခြားသူတွေ စာအုပ်တွေဖတ်သလိုမျိုး ဂီတကို သူက အသုံးပြုပါတယ်တဲ့။ သီချင်းတွေက ပေးတဲ့ သံစဉ်တွေ၊ စာသားတွေကို ခံစားပြီး သူ့ရဲ့ဘ၀ထဲက အဖြစ်အပျက်တွေမှာရောင်ပြန်ဟပ်စေတယ် လို့ ဆိုတယ်။ ပီတာပြောပြတတ်တဲ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်း ၅ ပုဒ်ကတော့ ပင့်ခ်ဖလွိုက်ဒ် ရဲ့ Shine on You Crazy Diamond ၊ Comfortably Numb ၊ Wish You Were Here သီချင်း သုံးပုဒ်ရယ်၊ ဂျွန်လင်နွန် ရဲ့ Imagine ၊ ပြီးတော့ အလန်အော်လ်စန်ရဲ့ Seende Kærester သီချင်းတွေပါ။ အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက အီတလီကာပရိစ်ဆလတ်သုပ် နဲ့ သူ့ရဲ့ အမေကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တဲ့ ပါတီကိတ်မုန့် လို့ ဆိုတယ်။ ပီတာအကြိုက်ဆုံး သရုပ်ဆောင်က အယ်လ်ပါစီနို၊ ရောဘတ်ဒီနီရိုး နဲ့ ဂျက်နီကိုလ်စန် ပါ။ ဂီတကိုပဲ အမြဲတမ်းရူးသွပ်ခဲ့ပေမယ့် သူသဘောကျတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Godfather ရုပ်ရှင်တွေ၊ Carlito’s Way ၊ The Deer Hunter ၊ One flew over the Cucko’s Nest တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်။ အကြိုက်ဆုံး တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲက Friends ပါ။ ကမ္ဘာထဲက ဘယ်နေရာတွေများ သွားချင်ပါသလဲလို့ မေးကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပြီးအနုပညာတွေပြည့်ဝလှပနေတဲ့မြို့တော် ရောမမြို့ကြီးကို ချစ်မက်တယ်။ အမြဲတမ်းနေဖို့ဆိုရင်တော့ ၀ိုင်နဲ့ အစားအသောက်တွေ သူ့အကြိုက်ရနိုင်တဲ့ အီတလီနိုင်ငံက တောစ့်ကာနာဒေသမှာ နေထိုင်သွားချင်ပါတယ် လို့ ဖြေပါလိမ့်မယ်။
လီရွှယ်ရွေ့ ရရှိခဲ့တဲ့ဆုတွေ -
2012 India Open
2012 All England Open
Junior Tournaments -
2008 Asian Junior Championships
ပီတာ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုတွေ -
2010 - European Champion (5th), Copenhagen Masters (10th)
2009 - Korea Open (4th)
2008 - Denmark Open (3th), French Open, Copenhagen Masters
2007 - Malaysia Open (2th), Copenhagen Masters
2006 - European Champion, Singapore Open, Copenhagen Masters
2005 - Korea Open, Copenhagen Masters
2004 - European Champion, Copenhagen Masters
2002 - US Open, Copenhagen Masters
2001 - Copenhagen Masters, Korea Open
2000 - Korea Open, Danish Open, Taiwan Open, European Champion, Copenhagen Masters
1999 - Ipoh Masters, Copenhagen Masters, All-England Open, Japan Open (2th), Word GP-Final
1998 - Japan Open, Swiss Open, Danish Open, Malaysian Open, European Ch.
1997 - German Open, Taiwan Open, Hong Kong Open
1995 - Scottish Open, European-Junior-Champion in MS and MD
1994 - World-Junior-Champion in MD
Medals at World Championships: 1 x Silver (2001) and4x Bronze (1999, 2005, 2010 and 2011)
European Champion in Men's Singles: 1998, 2000, 2004, 2006 and 2010 (5)
Danish National Champion: 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 and 2011 (10).
IBF World Badminton Player of the year 1998
Special Award of the DBF 2006